भाजपा नेता र विरोधीहरुमाझ3घण्टाको लुकीचोरीः के के भयो त आज? – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsभाजपा नेता र विरोधीहरुमाझ3घण्टाको लुकीचोरीः के के भयो त आज?
भाजपा नेता र विरोधीहरुमाझ3घण्टाको लुकीचोरीः के के भयो त आज?
October 5, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, दार्जीलिङ, मुख्य समाचार 0
दार्जीलङः भाजपा नेता दिलीप घोषले आज आफूलाई कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाउनेहरुलाई घुमाउनसम्म घुमाए। लगभग3घण्टा चौरास्तादेखि भानुभवन, राजभवन, फेरि राजभवनदेखि चौरास्ता अनि गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनसम्मनै घुमाइएपछि घोषले अन्ततः विरोधको कठोर सामना गर्नपऱ्यो।
भाजपा राज्य कमिटी अध्यक्ष दिलीप घोषले आज विनय तामाङ गुटका गोजमुमो समर्थकहरूलाई विरोध गर्न कसरी घुमाए। यसको शुरूआत कसरी शुरू भयो, यसको विवरण यस्तो छ। भाजपा नेता दिलीप घोष दार्जीलिङ आइरहेको खबर सर्वत्र फैलिएको थियो।
दिलीप घोष लप्चु-पेशोकतिर आइपुग्दा विनय तामाङपन्थी लगभग 100 गोजमुमो समर्थकहरु दिनेश गुरूङको नेतृत्वमा चौरास्ता आइपुगेका थिए, यी सबैले हात-हातमा कालो झण्डा बोकेका थिए। किनभने, भाजपा नेता घोष चौरास्ता नजिकै अवस्थित होटल सनफ्ल्वारमा बस्ने भएका थिए। यति मात्रै होइन, होटल सनफ्ल्वारमा केही समय विश्राम लिएर उनले महाकाल मन्दिरको पनि दर्शन गर्ने कार्यक्रम थियो।
यो कार्यक्रम थाह पाएरनै विनय गुटका समर्थकहरु चौरास्तामा भेला भएका थिए। यसको लगभग3घण्टापछि मात्रै यी विरोधी गोजमुमो समर्थकहरुसित दिलीप घोषको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनभित्र जम्काभेट भयो। जसको विवरण यस्तो छः
बिहान 11.20 बजीः लगभग 100 जना विनयपन्थी गोजमुमो समर्थकहरु दिलीप घोषको विरोध गर्न चौरास्ता आइपुगे।
मध्यान्ह 12 बजीः दिलीप घोष सोझै महाकाल मन्दिर जाने हल्ला सुनियो। यो हल्ला सुनेपछि यी विरोधीहरु भानुभवनअघि भेला भए। तर दिलीप घोष आएनन्।
अपरान्ह 12.40 बजीः हल्ला भयो, दिलीप घोष रायभिल्ला गए। जहाँबाट घोष चिड़ियाखाना रोड भएर महाकाल मन्दिर आउन सक्ने अनुमान लगाइयो। यसैले सबै फेरि राजभवनअघि भेला भए। तर यहाँ पनि आएनन् दिलीप घोष। यसैबीच, दिलीप घोषले गोजमुमो विमल गुटका सदस्यहरुसित रेलवे स्टेशनदेखि दार्जीलिङको चौकबजारसम्म जुलूस पनि निकालिसकेका थिए अनि चौकबजारमा एक पथसभालाई पनि सम्बोधन गरिसकेका थिए।
अपरान्ह 12.50 बजीः यो खबर सुनेपछि विरोधी समर्थकहरु फेरि चौरास्ता आए अनि केही समय यहाँ बसे।
अपरान्ह 1.25 बजीः सबैले चौरास्ताबाट सोझै गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमानै जाने सल्लाह गरे। जहाँ दिलीप घोषको कार्यक्रम थियो।
अपरान्ह 3.15 बजीः दिलीप घोष गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनभित्र प्रवेश गरे। जहाँ व्यापक विरोध शुरू भयो, दिलीप घोष गो व्याकको नारा गुन्जियो। तरै पनि घोषले मन्च छोड़ेनन् अनि उपस्थित जनतालाई केही भन्ने प्रयास गरे। तर उनको आवाज चर्को नाराको आवाजमुनिनै दबियो।
अपरान्ह 3.30 बजीः दिलीप घोष आफ्ना समर्थकहरुसित भवनबाट बाहिरिए अनि विरोधीहरुले गतिलो थप्पड़ी मारे। यसपछि उनीहरु भवनबाटै बाहिर निस्किएर भाजपा नेताहरुमाथिनै थप्पड़ र घुस्सी हान्न थाले।
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ
कसरी खाए दिलीप घोषले दार्जीलिङमा धुलाई?